Mitandrema amin'ny famohana ny bootloader, sao ho very Android Pay | Vaovao momba ny gadget
Mitandrema amin'ny famohana ny bootloader, sao ho very ny Android Pay
Ireo mpampiasa manana Android fitaovana miaraka amin'ny bootloader tsy voavaha dia tsy hanana fidirana amin'ny finday Android Pay intsony. Azoko natao ny namonjy ny tsara indrindra ho an'ny farany, saingy tsy toy izany, inona no tsara kokoa noho ny mazava sy fohy amin'ny andalana voalohany. Izany dia mahatonga antsika hahita fa ny Android dia mitovy bebe kokoa amin'ny iOS ary ny iOS dia mitovy amin'ny Android, indraindray ny filaminana dia aleo mihoatra ny fanaingoana. Ny fanavaozana ny SafeNet farany avy amin'ny Google dia ilay meloka fa tsy miasa intsony izy io, ary rehefa miresaka momba ny vola sy ny antsipirian'ny banky isika dia fotoana tokony hisian'ny filaminana faran'izay mafy, fantatr'i Google izany.
Handray ilay hafatra hoe "tsy afaka nanamarina ny lozisialinao izahay mpampiasa" ary manakana ny mpampiasa tsy handoa. Fitaovana marobe, eny fa na ny Google Nexus farany aza aza dia mety hijaly noho io fahasembanana io. Ny mpampiasa sasany amin'ny Nexus 6P dia mampitandrina fa ny fitaovan'izy ireo dia manokatra ny bootloader na dia fitaovana amina orinasa iray manontolo aza izy ireo fa tsy novain'ny rindrambaiko. Fahavoazana lehibe hafa koa ny OnePlus 3, fitaovana iray amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny bootloader tsy voavaha ary hahazo loka hafa amin'ny endrika sakana amin'ny Android Pay. Noho izany, alao antoka fa ny satan'ny fitaovanao alohan'ny handefasana ny fametrahana ny fanavaozana.
Tsy azo ampiasaina amin'ity fitaovana ity ny karama Android… Tsy afaka nanamafy i Google fa mifanentana amin'ny Android ny fitaovanao na ny rindrambaiko ao aminy. Betsaka no mila manongotra ny fitaovanao.
Izay no hafatra raisin'ny mpampiasa. Ny zavatra mampiahiahy indrindra dia ny Google nanapa-kevitra ny tsy hampitandrina ara-potoana ampy, na makà fepetra mavesatra kokoa. Io no teboka, rehefa avelanao ny fanasamihafa ny rafitra fiasao dia tsy azonao atao ny mamela ireo mpampiasa tsy misy fiasa eo ankavanan'ny ramanavy. Etsy ankilany, hisy fiatraikany ratsy amin'ny fanitarana ny Android Pay ho fomba fandoavam-bola tsy misy ifandraisany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Mitandrema amin'ny famohana ny bootloader, sao ho very ny Android Pay
Ahoana ny fampidinana ny fampiharana Google Wallpapers vaovao
Nokia dia nanandrana tamim-pahombiazana ny optika fibre giga-per-segondra 52